Naratra mafy voatsindron’antsy tao amin'io trano fandraisam-bahiny io ilay tovovavy antsoina hoe A…. noho ny tsy fifankahazoana teo aminy sy ilay sakaizany, raha ny tombana vonjimaika. Tsy fantatra mazava izay tena olana teo amin’izy roa ireo. Tabataba fifamaliana no henon'ireo mpiasan'ny hotely, ka rehefa nojerena dia vatana efa feno ra no novantanina sy novonjena tao. Nandriaka ny ra na teo amin’ny fandriana na tao amin’ny “toilette”, izay azo adika fa tena nifandramatra tanteraka ny an-daniny sy ny an-kilany. Nentina namonjy hopitaly haingana moa ilay vehivavy izay efa tsy nahatsiaro tena sy nitanjaka. Ilay lehilahy sakaizany heverina ho nahavanon-doza kosa vaky nandositra ka tsy hita popoka hatramin’ny omaly takariva. Ny zava-dehibe nimasoana rahateo, dia ny famonjena ilay vehivavy naratra mafy, izay nentina notsaboina ao amin’ny Hopitalin’Androva ao an-tampon-tanànan’i Mahajanga.